यस्ता राेगहरुकाे समाधान गर्न दैनिक दुई घण्टा उभिऔँ - ज्ञानविज्ञान
दैनिक दुई घण्टा उभिनु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने एक अध्यनले बताएको छ । घर तथा कार्यालयहरुमा लामो समय सम्म लगातार बसेर काम गर्नेहरुमा ढाड दुख्ने देखि लिएर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुले निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ ।
कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले उनीहरुको कुल समय भर करीब ७० देखी ८० प्रतिशत कुर्सिमा बसी बसी काम गर्ने वा काम नगर्नेहरु घरमा बसेर वित्ने देखिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरु छिटै शारीरिक तथा मानसिक रोगी हुने गरेको पाइएको छ ।
उक्त अध्ययन अनुसार हामीले कम्तीमा पनि दिनको दुई घण्टा उभिने गर्नु पर्छ र हामीले यस समयलाई दिनदिनै विस्तारै बढाएर ३ देखी ४ घण्टासम्म पुरयाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यालयमा बसेर काम गर्नेलाई ३० देखि ४० मिनेटको अन्तरमा शरीर तन्काउनु पर्छ भन्दै डाक्टरहरुके सुझाव दिएका छन् ।
हामीले दैनिक दुई घण्टा वा सो भन्दा बेसी उभिनाले मधुमेह, मोटोपन, मानसिक रोग, तथा अन्य थुप्रै समस्याबाट मुक्ति मिल्ने तथा हाम्रो शरीरलाई फिट रहने अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
योगा र ध्यान गर्नाले हाम्राे स्वास्थ्यमा यस्ताे परिवर्तन साथै क्यान्सरको जोखिम पनि
Don't Miss it पिज्जा मन पर्छ ? अब घरमै बसेर यसरी सजिलै बनाउनुहोस् स्वादिष्ट भेज पिज्जा
Up Next बालबालिकाको कान पाक्नुकाे कारण के हाे ? जानिराखाैँ